Mukadzi anodzoka kubasa asina chipfeko chemukati	Thursday, 23 May 2013 08:12	Kwamuri teteNdiri murume ane makore 40 okuzvarwa. Ndine mukadzi uyo ane makore 25 okuberekwa.Dambudziko rangu ndere mukadzi wangu iyeyu. Mukadzi wangu uyu anodzoka kubva kubasa achinja chipfeko chemukati everyday, kana kuuya dzimwe nguva asitorina chipfeko Read more...
Tete, ini ndinokasika ku . . .	Thursday, 16 May 2013 08:45	Kwamuri Tete,Ko nhai tete, imba yangu yoparara here imi munobatsira vazukuru venyu muripo?Nyaya yangu yakamira yakadai: Ndiri murume ane makore 33 okuzvarwa uye ndakaroora. Nyaya yanetsa tete ndeye bonde mumba mangu. Read more...
Mai mwana vakaenda havadzoke	Friday, 10 May 2013 06:26	Kunemi teteNdiri murume wechidiki ndichigara muraini raDarare, kwaMurehwa. Mudzimai wangu ndewechidikiwo uye vabereki vake vanogara kwaNherera, munharaunda imwe cheteyo. Takaroorana makore mashanu apfuura uye tine mwanakomana wedu mumwe chete. Tiri vaviri tinodanana chaizvo asi amai vemudzimai wangu, ambuya vangu, vanoda Read more...
Ndodini nemurume uyu?	Thursday, 02 May 2013 10:08	Kwamuri tete,NDIRI mudzimai ane makore 32 okuzvarwa. Dambudziko rangu ndeiri tete: Makore mana apfuura ndakasiiwa nemurume wangu wandakaita naye vana vatatu, vasikana vose. Paakandisiya handina kana hama yake yakandibatsira kuchengeta vana ava.
Ndoita chipfambi here?	Monday, 29 April 2013 09:18	Kwamuri teteNDIRI mudzimai ane makore 40 ekuberekwa. Dambudziko rangu rakamira sezvizvi: Ndakaroorwa asi murume wangu akati ndinosemesa zvekuti haakwanise kurara neni. Tave nemakore matatu nechidimbu tisina bonde tose. Read more...
Imi babamukuru, babamukuruka!	Friday, 19 April 2013 09:21	Kwamuri tete,Ndiri mukadzi ane makore 33 okuberekwa, ndakaroorwa asi murume wangu haana kundibvisira pfuma yeroora. Read more...
Ndiri murume wechikwambo	Thursday, 28 February 2013 10:29	Kuna teteNDIRI murume ane makore 45 uye ndine mudzimai nemwana mumwe chete. Kuti ndiite mwana nemudzimai wangu zvaive zvekutamburira, takagara nguva refu tisina
Amai vondiita murume wavo	Thursday, 14 February 2013 10:02	Kuna tete,Ndiri mukomana ane makore makumi maviri nerimwe. Dambudziko rengu nderekuti ndakakura ndichichengetwa kunochengetwa nherera, asi handisi nherera, ndakatiza kumba kubudikidza
Ini ndakato‘lokwa’ mumba	Thursday, 31 January 2013 10:22	Kuna tete,Ndinotenda nekuburitsa chokwadi chezvinoitika mukurarama kwevanhu mu-Zimbabwe. Senyaya ya-Madzimai Agnera, (Kwayedza ra11 Ndira 2013) yakadudzira zva-kaitika kwandiri – ini
Ndorasa mwana here?	Thursday, 20 December 2012 14:00	Kwamuri tete,Ndiri mukadzi ane makore 48 okuberekwa, ndakarorwa uye ndine mwana wangu mukomana uyo pandakangoroorwa ndakumuendesa
Chiso kuita sechegudo?	Thursday, 13 December 2012 11:48	Kuna tete,Ndiri murume ane makore 35 ekuberekwa. Regai ndibva ndangopinda mudambudziko rangu.Ndikaroora mukadzi handigare
Vabereki vakandiramwa	Friday, 07 December 2012 08:20	Kwamuri tete,Ndiri murume ane makore makumi mana ekuzvarwa, ndakaroora uye ndine mhuri yangu. Ndasvika pakuchembera